I-VILLA GRACIA GUESTHOUSE YEENKDE & NEGADI
Igumbi lakho lokulala e indlu enendawo yokuphola sinombuki zindwendwe onguSara
Indawo yokuhlala ephangaleleyo enegadi kunye neendawo zokupaka, kwindawo ezolileyo eyi-3km ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya (kunokwenzeka ukukuthatha / ukukushiya). Amagumbi akhululekileyo nangena umoya. Igumbi lokulala elincinci elinomoya ophindwe kabini kwisakhiwo esihlaziyiweyo. Ukulungele ukuhlala okufutshane yedwa okanye kunye nabantu ababini. Okanye ukuhlala ixesha elide komntu omnye onqwenela ukuzimela. Ukubanakho ukwabelana ngesidlo kunye/okanye isidlo sakusasa. Sijonge ukukwamkela kuko konke ukulula, ubuhlobo kunye nokukucebisa ngexesha lokuhlala kwakho. Wifi!
Indlu yoyilo yaseTogolese enegumbi lokuhlala, ikhitshi elahlukileyo, iipatio ezi-2, izindlu zangasese zangaphakathi nangaphandle. Isitiya esigcinwe kakuhle, isitiya semifuno. I-Wifi iyasebenza. Amagumbi alula kwaye acocekileyo anedesika, umoya, ukugcinwa, iminatha yeengcongconi.
Indawo ezolileyo kufutshane nesikhululo seenqwelomoya (akukho ngxolo) kunye ne800m ukusuka eTogo2000 (Parc des expositions et foires du Togo). Isikhundla esiphakathi eLomé, engekude kwiindlela eziphambili ezikhonza izithili ezahlukahlukeneyo zaseLomé, emantla elizwe kunye nonxweme lwaselwandle. Ukonga ixesha elininzi.
Ababuki zindwendwe abakhoyo (ukuba kukho imfuneko) ukukucebisa kunye nokukhapha ngexesha lokuhlala kwakho: uhambo, iinkqubo ezahlukeneyo, ukuphuma, iindawo zokutyela, izibhedlele, njl.